‘क्याप्टेन’ निर्देशनमा दिवाकरमाथी भुवन केसी हाबी थिए ? « Filmy Nepal
‘क्याप्टेन’ निर्देशनमा दिवाकरमाथी भुवन केसी हाबी थिए ?
Published On : 28 August, 2019 3:58 pm
By : Filmy Nepal
निर्देशक दिवाकर भट्टराई गत बर्षको फागुनमा फिल्म ‘क्याप्टेन’ रिलिजपछि यतिबेला फुर्सदमा छन् । तर हालै बाहिरिएको एक खबरले उनि नयाँ फिल्मको तयारीमा जुटिरहेका छन् । ‘तिमीसँगै हुने मन छ’ नाम लिएर फिल्म बनाउन लागेको समाचार मिडियाहरुमा सार्वजनिक भएका छन् ।
उक्त शिर्षकको स्कृप्टमाथी वर्कआउट गरेका दिवाकरले यो पटक फिल्म निर्देशन मात्रै गर्दै छैनन् निर्मातापनि बन्दैछन् । निर्माता बन्दैगर्दा दिवाकरले एक मिडियासँगको कुराकानीमा अब सबै निर्देशक निर्माता बन्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘निर्देशक आफैं निर्माता भएपछि मात्र स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाइन्छ ।’ जुन कुराले अरुको लगानी (अण्डर) मा काम गर्दा असहज हुने खुलाउँछ ।
दिवाकरको उल्लेखित भनाइ सार्वजनिक हुँदा उनका पछिल्ला फिल्ममा फर्किनुपर्ने हुन्छ जहाँ उनले दुई पटक त अभिनेता निर्माता भुवन केसीसँग मिलेर काम गरेका छन् । एक पटक रमेश उप्रेतीसँग ‘ऐश्वर्य’ गरे । त्यसले त उनलाई फलिफाप नै भयो, लभ पर्यो हिरोइन दीपिका प्रसाइँसँग लगनगाँठो नै कसे । त्यो पहिले उनले ‘ड्रिम्स’ मा भुवनको एशोसियट निर्देशक र फागुन रिलिज ‘क्याप्टेन’मा निर्देशकको भुमिका निभाएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तीले पछिल्लो प्रोजेक्टमा दिवाकर कतै भुवन केसीको दबाबमा परेका त थिएनन् भन्ने तर्फ संकेत गर्छ ।
त्यसो त ‘क्याप्टेन’ निर्देशनको समयमा दिवाकरमाथी भुवन केसीमात्रै हैन सेटमै निर्मात्री रहेकी जिया केसीसम्म हाबी भएको र उनलाई सिकाउन तम्सिएको प्रकारका कुराहरु पनि गसिप बजारमा आएका थिए । त्यसैले भुवन क्याम्पबाट बाहिर निस्केर काम सुरु गर्नासाथ दिवाकरले दिएको अभिव्यक्ती कतै भुवनलाई नै त होइन ? प्रश्न उठ्नै ठाउँ छ ।
निर्देशक समाजको अध्यक्षमा रक्षासिंह १ मतले विजयी (विजेताको सुचीसहित)
नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजको तीन बर्षे कार्यकालको लागी शनिबार सम्पन्न चुनावी साधारणसभाले रक्षासिंह राणाको नेतृत्वमा
सेल्फी किङ गीत रिलिजः ‘जाली रुमाल’मा केकीको ठूम्का (भिडियो)
आगामी माघ २४ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेको विपिन कार्की स्टारर फिल्म ‘सेल्फी किङ’मा समावेश
पलको अङ्गालोमा बोल्ड पूजा, ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ अफिसियल गीत रिलिज
सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को अफिसियल गीत रिलिज भएको छ
विपिन कार्की अभिनित फिल्म ‘सेल्फी किङ’ को टिजर रिलिज
– अनुकूल अर्याल विपिन कार्की स्टारर फिल्म ‘सेल्फी किङ’ को अफिसियल टिजर रिलिज भएको छ
सेल्फी किङ गीत रिलिजः 'जाली रुमाल'मा केकीको ठूम्का (भिडियो)
आलिया बनिन् एशियाकै सर्वाधिक सेक्सी महिला, दशौं नम्बरमा प्रियंका !
मण्डलामा 'झोला हराएको मान्छे'
मिस वर्ल्ड २०१९ फाइनलः अन्तिम १२ बाट बाहिरिइन् अनुष्का
रोशनको शब्दमा उज्जलको ‘धून’
© 2019 Filmy Nepal